Kudhawaad shan boqol oo qof lagu soo qabtay howl-gal laga sameeyay Xamarweyne-DHAGAYSO – Radio Muqdisho
Kudhawaad shan boqol oo qof lagu soo qabtay howl-gal laga sameeyay Xamarweyne-DHAGAYSO
Ciidamada ammaanka oo kaashanaya ciidamada booliska ee AMISOM ayaa howl gal ay ka sameeyeen degmada Xamarweyne ku soo qabtay dad ka badan 500 oo qof oo la tuhunsan yahay in ay ku jiraan dadka ammaanka lid ku ah.
Guddoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir ayaa Radio Muqdisho u sheegay in dadka la soo qabtay ay ciidamada boolisku baarayaan, kaddibna la sii dayn doono dadka aan dambiga lahayn.
Wuxuu sheegay in macluumaad la helay uu ka dhashay howl-galkani, ayadoo sidoo kale ammaanka magaalada lagu xaqiijinayo. Ciidamada ayaa xiray subaxnimadii hore ee saakay dhammaan waddooyinka ka baxa degmada Xamarweyne si aysan u baxsan kuwa la baadi goobayo.
Saldhigga Afar Irdood ee Booliska ayaa la isugu geeyay dadka la soo qabtay oo isugu qaar la tuhunsan yahay inay Al-Shabaab xiriir la leeyihiin iyo kuwo hub sharci darro ah ku heystay gudaha degmada sida uu xaqiijiyay guddoomiye Cabdulqaadir.
Qeybta hoose ka dhagayso wareysiga guddoomiyaha degmada Xamarweyne
Dhagayso Warka Subaxnimo 10.02.2015
Xaaladda Guriceel oo deggan kaddib markii ay saakay weerareen maleeshiyaad hubeysan-DHAGAYSO